AutoCAD 2010 သင်ခန်းစာ
AutoCAD 2010 သင်ခန်းစာ ကို Basic မှစ၍ လေ့လာနိုင်ပါပြီ။
Linux Operating Systemကို စတင်လေ့လာသူတွေ အတွက် Basic Tutorial လေးဖြစ်ပါတယ်။
Microsoft excel course ကို Myanmar ဘာသာဖြင့်လေ့လာလိုက်ရအောင်။ Excel Excel isaspreadsheet program. That means it’s used to create grids of text, numbers and formulas specifying calculations. It can be programmed to pull in data from external sources such as stock market feeds, automatically running the data through formula such as financial models to update such…
computer အကြောင်းများကို စုစည်းတင်ပြထားသည်။
facebook အကြောင်းများ လေ့လာရအောင်
Programming languages ကိုလေ့လာလိုသူများ အလွယ်တကူးလေ့လာနိုင်အောင် စုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
January 17, 2019 /5Comments
HTML ကိုလေ့လာလိုသူများ အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်အောင် စုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Japan ဘာသာစကားမြာြးကို စုစညျးတငျပွထားသညျ။